2021 Princeton Review DAT [$150 dhimis OFF]
Diyaargarowga ugu sarreeya ee DAT
Review Princeton Taabbagalay
2. Resource Comprehensive
5. Fiiro gaar ah u Detail
8. Manipulatives Kartida garasho
9. Princeton Review yaboohay
10. Free-Length Full DAT Practice Test
11. Kala duwan oo ka mid ah hababka waxbarasho
13. Adeegga macaamiisha
1. Supplemental Study Waxyaabaha laga yaabaa in loo baahan yahay
2. Helitaanka Limited for Koorsooyinka Live
The burburka Review Princeton Review Course DAT
Xeerarka Kooban ee Dib-u-eegista Princeton ee ugu Fiican & dhimis
Review Princeton The waxaa la aasaasay bishii 1981 iyo waxa uu ahaa hoggaamiye waqti dheer in industry ee adeegyada baaritaanka-diyaarinta. Waxay ka caawiyey kumanaan arday kulliyadda gaaraan ujeedooyinkooda-waxbarashada sare iyada oo loo marayo adeegyada ay. koorsooyinka DAT diyaarinta dhamaystiran ay ku siiyaan wax walba oo aad u baahan tahay si ay isugu diyaariyaan DAT ah oo ka dhergi doona dhibcaha aad – waxay u dammaanad.
Review Princeton ayaa socta waqti dheer in industry ee diyaarinta DAT. Inkasta oo ay la yasin laga yaabaa in waqtiyada, ay u haayay koorsooyinka dib u eegis ay ka badan sannadkii la soo dhaafay oo ay tahay uruursanayey sare oo u qalmaan inay eegtaa waxay halis ah marka la go'aaminayo waxa qalabka udiyaarin DAT in ay isticmaalaan.
imtixaanada dhaqanka iyo thay waxaa lagu soo bandhigay qaab la mid ah computer aad arki doonaa maalinta imtixaanka oo ay ku jiraan xadka waqtiga ku haboon, jebin siyaasadaha iyo xeerarka u dhaqaaqo iyada oo loo marayo content imtixaanka. Tani waxay aad familiarizes la format ku Test Admission ilkaha iyo waxay ka caawisaa dhisi aad ku kalsoonaan karto si aad u burburin doonaa maalinta imtixaanka dhabta ah ee aad.
The Qab qabashada DAT ah buugga la 880+ bogagga macluumaadka daboolayaa mawduuc kasta oo noqon doona on DAT ah. Buugani wuxuu kaa caawin doona inaad la dhiso aasaas adag qaybta kasta oo Baaritaanka Admission ilkaha iyo sidoo kale u adeegtaan khayraad si loo eego in ay waxgarashada. qalabkan si fiican kuu adeegaynaa in waxbarashada.
Iyada oo boqolaal su'aalo iyo afar imtixaan dhererka buuxa, aad leedahay doonaa badan oo dhibaatooyin si ay u xalliyaan oo wax ka baro format ah in aad arki doonaa on DAT dhabta ah. Waxaan jeclahay sida ay u ka mid ah dhowr su'aalo ah oo ku dhaqan ka dib markii qeybta kasta oo dib u eegis content ee Qab qabashada DAT ah buugga si aad u eegi kartaa fahamkaaga ka dib markii dib u wax. Waxay sidoo kale waxaa ka mid ah xal u su'aal kasta oo dhaqanka, taas oo muhiim u ah waxbarashada iyo waxgarasho.
Wararka Falanqaynta ahaan imtixaan kasta dhaqanka aad qaadato iyo caawimo si ay u aqoonsadaan meelaha aad ugu liita iyo sida ugu wanaagsan ee ay ula qabsadaan aad diyaarinta si loo sare qaado tirooyinka aad. Waxay u falanqeeyaan qayb kasta oo baaritaanka nooca su'aasha iyo siiyaan falanqeyn dhameystiran qaab. Waxay aad u faahfaahsan yihiin iyo xitaa bixiyaan talo gaar ah loogu talagalay in natiijada. Waxay sidoo kale kaala talin doonaa meelaha waxa inaad wax ka barato oo ay diiradda saaraan ku salaysan natiijooyinka.
Waa maxay run ahaantii ii soo bandhigay ee ku saabsan Review Princeton waa ay fiiro gaar ah u faahfaahsan. Waxay bixiyaan sharaxaad dhamaystiran ee maadooyinka oo dhan si aad marnaba ka tagay mugdi ah. Waxay bixiyaan sharraxaad ku saabsan DAT ah, oo ay ku jiraan dulmar guud, isagoo dhaliyay warbixin iyo macluumaad ku saabsan dugsiyada ilkaha. Waxaad mar walba ogaan doonaa waxa aad filan kartid iyo sida loo diyaariyo, waayo,.
Princeton Review xitaa waxay bixisaa talo ku saabsan wixii aad samayn lahayd in qaybaha qaarkood marka aad u hesho lacagaha xaqal ama hubin. Waxaa jira manhajka maado kasta, dhasay waxa la sameeyo ka hor inta fasalka, gool muddo fasalka, hawlaha ku-fasalka, waxa homework waa in la sameeyaa ka dib markii fasalka iyo waxa loo baahan yahay waqtiga xiga. Waxa aad u wanaagsan u habaysan oo abaabulan. Waxay u maleeyay in wax kasta oo u darabnay Dabcan dib u eegis dhamaystiran oo wax ku ool ah oo dhamaystiran.
Waxaa jira xeelado imtixaanka-qaadashada wax ku ool ah, waayo qaybta kasta oo DAT ee Qab qabashada DAT ah. Waxay bixiyaan xeelado kala duwan oo qayb kasta si aad ka heli kartaa istaraatijiyad kuu shaqeeya.
Waxaa jira hage tixraac 16-bog ee soo gunaanaday Qab qabashada DAT ah in khayraadka weyn waxaysidoo inay ka bartaan, haddii aad tahay on go ah ama aad rabto kororsi deg deg ah. Hagaha waxaa ku jira ku qaaciidooyinka ugu muhiimsan, jaantus, macluumaadka iyo fikradaha for qayb kasta oo ka DAT.
By iibsiga mid ka mid ah baakadaha Dabcan dib u eegis ay ku waxaad heli doontaa waxyaabaha kaa caawinaya in aad kor loogu qaado xirfadaha for Baaritaanka Kartida garasho. gacan-ku qalabkan la musuq maasuqay karaa in arki iyo dhaqanka for Takoorka Malaggii (ciidmada xagal), laabi Paper (Hole feedh), Tirinta Cube iyo Horumarinta Form 3D (laabi Qaabka) qaybaha Baaritaanka Kartida garasho. Waxa kale oo jira waraaqaha iyo qalabka dheeraadka ah online in Portal Ardayga ee ardayda si ay u helaan tababar dheeraad ah la waayo, PAT iyo sidoo kale qaybaha kale ee DAT ah.
The Princeton Review yabooha waxaa ka mid ah saddex damaanado:
Guarantee Diyaargarowga: Haddii dhamaadka kooraska, aadan u malayn diyaar u tahay inay qaadato imtixaanka, waxaa laga yaabaa inaad sii wadaan inay iyaga la shaqeeyo ilaa hal sano ah.
Guarantee Qanacsanaanta: Haddii dhamaadka kooraska, aadan ku qanacsanayn, iyadoo aan loo eegin inta score hagaajinaysaa, ka dibna waxaad sii wadi kartaa in ay la shaqeeyaan ilaa hal sano ah.
Guarantee Money Back: Haddii aad score aysan horumar ka dib markii koorsada, waxaad heli kartaa lacag celinta waxbarashada ah.
Arday kasta xaq u dooran kartaa oo keliya mid ka mid ah damaanad waxay bixisaa khuseyso in ay barnaamijka. Waa in aad qayb galaan barnaamijka oo dhan, qaadaan dhammaan imtixaanada loo xilsaaray oo buuxi dhammaan shaqada guriga si ay u qalanto damaanado ay.
The Guarantee Diyaargarowga ma loo heli karaa barnaamijyada umeerinta ee gaarka loo leeyahay, in in-qof ama online, ama koorsooyin online is-socod. ardayda LiveOnline waxaa looga baahan yahay in ay soo diri in shaqada guriga oo dhan si ay u muujiyaan waxa ay dhameystirtay oo dhan oo ka mid ah shaqada guriga. Waxaad aan la siin doonaa qalab cusub haddii uu jiro a version isbedel wax.
The Guarantee Qanacsanaanta ma loo heli karaa barnaamijyada umeerinta gaar ah oo aan ka ahayn barnaamijyada umeerinta dhamaystiran (ugu yar ee 30 saacadood) ama barnaamijyada umeerinta maado.
The Guarantee Money Back waxaa laga heli karaa in qof kasta oo aad qaadato maaddada DAT a, marka laga reebo Online is-socod, umeerin maado ama umeerin ka yar 30 saacadood ee Barnaamijka Umeerinta gaarka ah ee Comprehensive, iyo dhibcaha imtixaanka ma hagaajiyo, ka dibna aad xaq u leedahay lacag celin buuxda.
Waxaad qori kartaa online u gasho imtixaanada tijaabada DAT dhererka buuxa for free. Waxaan ku talinaynaa lahaa sameeyo ka hor aad bilowday waxbarashada si aad u arki kartaa sida ugu wanaagsan ee aad samayn iyo in la garto waxa meelaha aad u baahan doontaa in la hagaajiyo. Inta badan waxa aad helaysaa in la hagaajiyo ee meel walba oo, laakiin aad ugu yaraan qaadan kartaa imtixaanka barbarashada ee si xor ah u leeyihiin saldhig ah in aad is barbardhigi kartaa ka dhanka ah.
Iyada oo noocyo kala duwan oo koorsooyin la heli karo, Review Princeton waxa uu ka dhigayaa suurto gal ah ee nooc kasta oo bartaha inay tacliin qaataan jidkii uu iyaga ugu fiican u adeegta; haddii in uu keligiis ka shaqeeya, dhigata fasalka ee-qofka ama online, ama macalin gaar ah ka shaqeeya.
All of maaddadu ay mooyee Qab qabashada DAT ah, ah Workbook, ah In-Class Compendium iyo manipulatives PAT waxaa laga heli karaa online – buugaagta iyo manipulatives PAT loo soo diri doonaa in aad. Ma loo baahan yahay in ay soo bixi software kasta si ay u helaan online content taas oo macnaheedu yahay in aad leedahay fududahay in Dabcan dib u eegis aad u helaan meel kasta oo ay jiraan Internet.
Out of dhan oo ka mid ah shirkadaha diyaarinta DAT aan macaamiloodeen ay la leeyihiin qaar ka mid ah adeegga ugu fiican ee macaamiisha. Waxay mar walba ixtiraam, wakhti iyo waxgarasho marka waxaan ku fallay iyagii oon. tayada adeegga macaamiisha waa mid muujisa ee shirkadda iyo wax soo saarka guud ahaan in my opinion. Waxaan oonu lahaa in shirkad tayo sidaan oo kale ah ku siin doonaa wax soo saarka oo tayo leh in aad ku kalsoon tahay kartaa.
Princeton jaban gaar ah loogu talagalay akhristayaasha burburi.
Save $150 OFF koorso kasta oo Princeton DAT. Save $100
Review Princeton ayaa ku siin kara oo leh aasaas adag, waayo Baaritaanka Admission ilkaha oo kaa caawin kara inaad si loo gaaro 20+ Dhibcaha on dhammaan qaybaha DAT ah; si kastaba ha ahaatee, su'aalaha dhaqanka dheeraadka ah iyo imtixaan waa kuwo mar kasta waxtar leh iyo waxqabad dheeraad ah ka caawin kara ka dhigi aad wax dheeraad ah iyo sidoo kale-fekrado iyo si wanaagsan isugu diyaariyeen ka DAT.
Ku nool yihiin in-qof koorsooyinka ay bixiyaan Review Princeton waxaa aad u xadidan halkaas oo ay ku bixiyaan. Waxaad ka eegi kartaa online si aad u aragto meesha koorsooyinka la heli karo ee ugu dhow waa inaad. koorsooyinka ay ku nool yihiin laga yaabo in aysan noqon sidii ay heli karaan qof walba, laakiin weli waxay leeyihiin koorsooyin online gaarka ah ee laga heli karo si cid kasta oo meel kasta oo.
Waxaan aad ugu boorinayna lahaa Princeton Review ee Ultimate Live Online Course si cid kasta oo halis ku saabsan u dhaliyay sare on DAT ah. Waxa aad ka heleysaa wax kasta oo aad ka heli lahayd ka baakadaha kale iyo farabadnaa awoodi badan ugu. buugaagta The, dhaqanka su'aalo iyo imtixaanada dhererka buuxa in aad leedahay doonaa helaan ay noqon doontaa mid muhiim u ah in aad diyaarinta. Waxay kaa caawin doonaan inaad la dhiso aasaas iyo yaqaano for qayb kasta oo DAT ah oo aad u adeegtaan khayraad si loo eego in ay waxgarashada dheeraad ah iyo aqoonta.
Waxay bixiyaan Dabcan dib u eegis ugu dhamaystiran oo aad u faahfaahsan oo dhamaystiran aan ku arkay. Waa wax iska cad ay ku riday markii si ay u daboosho dhammaan saldhigyada marka ay timaado isku diyaarinaya DAT ah. Waxay leeyihiin koorso aad u qaab-dhismeed wanaagsan oo abaabulan oo ay la socdaan waxbarashada gaarka ah by khubaro ku xiran ay aadka u tababaran. Waxay koorsooyinka dib u eegis DAT cusub u haayay hubaal waa mid ka mid ah in la tixgeliyo, inkastoo ay tahay ma raqiis ah waxaan dareemayaa in kasta oo ardaygu ku dadaala noqon doontaa guul in lagu gaarayo ujeedooyinka ay DAT la mid ka mid ah koorsooyinka ay.
Ogaaw in aad xor inuu ka hadlo i hoos ku qoran ama fariin la su'aal kasta oo aad ka qabto Koorsooyinka udiyaarin Review Princeton DAT!
Ii geyso DIB U EEGIDDA Princeton!
Review Princeton waxay bixisaa koorsooyin kala duwan DAT kala duwan si loo daboolo baahiyaha iyo qaabkiisa waxbarasho oo dhan noocyada kala duwan ee ardayda pre-ilkaha. Halkan liiska koorsooyinka ay dib u eegis la heli karo iyo waxa ay ka mid ah:
1. In Qofka Fasalka: Dib u content iyo bartaan xirfadaha baaritaanka-qaadashada ee DAT ka 3-5 ku takhasusay maado-arrin. Qeyb gali karaan wadahadallo iyo tababbarrada iskaashi ee fasalka a. Macallimiinta siin doonaa warcelin oo muujinaya wax adag iyada oo casharo wax ku ool ah. Access to content online dabcan bilaabmin 10 maalmood ka hor koorsada bilowdo muddo 120 maalmood. Dabcan waxaa ka mid ah sifooyinka soo socda:
55 saacadood ee barashada live oolna ah in ka badan 22 fadhiyo in daboolo dhammaan xeeladaha content iyo imtixaanka-qaadashada
4 dhererka buuxa, imtixaanada computer-ku-saleysan simulating DAT dhabta ah oo ay la socoto falanqaynta dhamaystiran oo natiijada
Qab qabashada DAT ah: 880+ bogagga daboolaya dhammaan dhinacyada imtixaanka, oo lagu daray set oo ah dib u eegis ku Hanuuniyaa
Workbook: 500+ bogagga dhaqanka su'aalo iyo sharaxaad faahfaahsan
In-Class Compendium: 180+ bogagga leh oo dhoollatus loogu talagalay in lagu caawiyo macalimiin aad isticmaasho waqtiga fasalka wax ku ool ah ka badan
Helitaanka manipulatives soo afaysto xirfadaha aragtida muuqaalka loo baahan yahay Baaritaanka Kartida garasho
-Dib Money dammaanad
Dabcan waxa uu ku siinayaa jadwal set oo ah fasalada live at Review Princeton waxbarasho dhexe iyo taageero toos ah ka macallimiinta ee fasalka a. Tani waa qofka in uu door waxbarashada fasalka la joogo macallin.
2. Live Online Fasalka: Dib u content iyo bartaan xirfadaha baaritaanka-qaadashada ee DAT ka 3-5 ku takhasusay maado-arrin. Ku raaxayso xor u yahay inuu ku biiro fasalka meel kasta ay dhacdo in aad noqon. All aad u baahan tahay waa internet-ka. Macallimiinta keeni doonaa casharada, aad galaan iyo howsha. Aad leedahay doonaa helaan cajalado digital ah kulan kasta fasalka haddii aad rabto in aad dib u eegto waano. Koorsadani waxay u qoreysa boosteejo ah oo gobolka-of-the-art online ku shaqeeya by sabuurada shaqee in siinayaa ardayda jawi is-dhexgal waxbarasho halkaas oo ay ku weydiin kartaa su'aalo iyo la shaqeeyaan fasalka lagu jiro tababbarrada iyo in-fasalka tababarka. Sabuurada shaqee bixisaa muuqaalada dheeraad ah sida:
qolalka Hakadyada su'aalo shaqsi
file sharing, qaybsiga screen iyo chat deg dega ah si loo fududeeyo xiriirka
isiticmaalaa dalwaddii inay dib u eegaan casharada iyo dhibaatooyinka tallaabo-tallaabo
gashto qalabaysan mikroofanada ay u oggolaadaan laba-hab isgaadhsiin afka ah
qalab codbixinta si ay u galaan fasalka iyo in la siiyo jawaab-celin degdeg ah
Access to content online dabcan bilaabmin 10 maalmood ka hor koorsada bilowdo muddo 120 maalmood. Dabcan waxaa ka mid ah sifooyinka soo socda:
55 saacadood ee barashada online oolna ah in ka badan 22 fadhiyo in daboolo dhammaan xeeladaha content iyo imtixaanka-qaadashada
Dabcan waxa uu ku siinayaa jadwal set of fasalo online iyo taageero toos ah ka macallimiinta a. Tani waa qofka in jecel yahay barashada iyo keli waxbarashada, weli inuu weli doonayo inuu fursad u taageero online ka macallin ka hesho haddii loo baahdo.
3. In Qofka Small Group: Helaan fiiro gaar sida aad u eegaan content iyo bartaan xirfadaha baaritaanka-qaadashada ee DAT ka 3-5 ku takhasusay maado-arrin. Hel-celinta shakhsi ballaaran oo ku salaysan awooda iyo daciifnimo iyo diirada saaraan waxa aad u baahan tahay si ay u yaqaaniin. Aflixin jawiga waxbarasho leh heer sare ah is dhexgalka ardayda iyo macalinka in koox yar dejinta la badnaan afar arday fasalka. Waxaad dooran kartaa koox yar oo adiga kuu gaar ah oo ka kooban asxaabta ama fasalka iyo in la dhiso wakhti haboon iyo meesha aad edbinta. Access to content online dabcan bilaabmin 10 maalmood ka hor koorsada bilowdo muddo 120 maalmood.
Dabcan waxaa ka mid ah sifooyinka soo socda:
Dabcan waxa uu ku siinayaa jadwal set oo ah fasalada live ah xarunta waxbarashada Review Princeton ama your site gaar ah loo qoondeeyey oo taageero toos ah ka macallimiinta meel koox yar. Tani waa qofka in uu door loogu talo galay iyo waxbarida shakhsiyeed si ay ula kulmaan baahidooda la joogay oo macallin.
Hel hal-hal u diyaar DAT ka macalin heer sare ah u tababaran. Barnaamijku wuxuu umeerin gaarka loo leeyahay waxay bixisaa shakhsi, tababarenimo diirada iyo dabacsanaan in sida ugu hufan oo wax ku ool ah la heli karo. The orod oo diiradda waxbarashada ku salaysan yahay hadafyadaada, baahida iyo hanaanka waxbarasho. Barnaamijka Your preperation waxa inta badan laga beddelo oo ku saleysan natiijooyinka imtixaanka baadhista joogto ah iyo qiimeynta khabiir ah barahaaga. Waxaad la isku aadiyo doonaa la barahaaga ugu fiican in xaq ay kuu. Waxaad iyaga ogeysiin doonaa of score aad rabto, dugsiyada ilkaha aad jeceshahay, sida aad u bartaan iyo jadwalka si aad u hesho hanuun saxda ah. rabbeeyey kuu iman doonaan si ay u. U sheeg meesha iyo marka aad rabto in aad la kulanto fadhiyo udiyaarin aad, oo waxay shaqeyn doontaa agagaarka aad jadwalka iyo hab nololeed. fadhiyada Your umeerin diiradda saari doonaa xoojinta awoodaha iyo dhismaha aad ku kalsoonaan karto. Your horumarka loo asteeyey doonaa iyadoo la adeegsanayo carbinta iyo imtixaanada dhaqanka dhererka buuxa si ay u dejiyaan bartilmaameedyo horumarka. Access to content online dabcan bilaabmin 10 maalmood ka hor koorsada bilowdo muddo 120 maalmood. Dabcan waxaa ka mid ah sifooyinka soo socda:
In-Class Compendium: 180+ bogagga leh oo dhoollatus loogu talagalay in lagu caawiyo macalimiin aad isticmaasho markii edbinta ku ool ah ka badan
Waxaa jira baakadaha kala duwan umeerin gaar ah la heli karo si aad u hesho doonaa edbinta ku filan in ay si buuxda u darbay. baakadaha waxaa ka mid ah:
baakadaha Comprehensive: Barnaamijka A 30-saac in ay ku qumman, waayo, arday raba udiyaarin qoto-dheer oo daboolaya dhamaan qaybaha imtixaanka. Dhammaan baakadaha dhamaystiran la The Review Princeton damaanad score-horumar iman.
Bixi-as-aad-u tago baakadaha: xirmo umeerin A in uu si buuxda u kartoo baahidaada. Waxaad dooran kartaa in ay diiradda saaraan Kulamo umeerin aad on qaybta gaarka ah ee DAT iyo ka go'an ma baxsan saddex saacadood bilowga ah. Just ku dari ka badan sida loogu baahan yahay.
In-Person: Waji ka waji, umeerin shakhsi ee gurigaaga ama meel kale oo ku haboon. Waxay ka shaqeeyaan agagaarka jadwalka si ay ula kulmaan mar kasta iyo meel kasta oo adiga kuu fiican.
Online: Hel hal-hal tababare ka ugu khibrad leh oo doondooneen ka dib rabbeeyey, iyadoo aan loo eegin meesha aad. All aad u baahan tahay waa computer ah oo internet-ka.
dabcan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u tagaan sida aad jeceshahay oo dhigay jadwalka adiga kuu gaar ah. Wuxuu ku siinayaa barashada live iyo taageero toos ah ka macalin ee gaarka loo leeyahay. Tani waa qofka in uu door toos ah barashada ka macallin, laakiin meel gaarka ah halkii fasalka.
Princeton DIB U EEGIDDA DAT
4. Warbixinta falanqaynta